TIKO Sambaina Manjakandriana : Potika sy rava – MyDago.com aime Madagascar
Taorianan’ ny fandrobana ny orinasa TIKO nataon’ny mpitondra fat dia nitsidika ny orinasa TIKO teny Sambaina Manjakandriana Ramatoa Lalao Ravalomanana niaraka tamin’ireo tomponandraikitra ambony ao amin’ ny TIKO . Nijery ifotony ny fahasimbana nahazo ny orinasa ny tenany.Tsy nijanona tamin’ireny fandrobana ny 26 Janoary 2009 ireny ny fandrobana ny orinasa TIKO fa mbola nitohy hatramin’izao ary nisy ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo mpiasa tamin’izany. Anisan’ny natao fahirano mihitsy ny orinasa TIKO manerana ny Nosy tamin’ireny Alatsinainy mainty ireny. Vao tonga teo amin’ny fitondrana Rajoelina dia nanome fampanantenana ireo tompon’ny orinasa voaroba sy may fa hisy ny fanarenana ny simba kanefa tsy nisy izany fa zary lasa fampanantenana poak’aty fotsiny hatramin’izao. Ny hany sisa fananan’ny orinasa TIKO izay tsy may sy voaroba aza dia mbola nanaovana antsonjay indray, ka mbola nalaina izany. Araka ny tombatombana dia mahatratra an-tapitrisany maro no teti-bidin’ny zavatra simba tao amin’ny orinasa TIKO. Marihina fa mbola hitohy amin’ireo orinasa TIKO manerana ny Nosy ny fitsidihana tanterahan-dRamatoa Lalao Ravalomanana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 26 avril 2013 Catégories Politique
23 pensées sur “TIKO Sambaina Manjakandriana : Potika sy rava”
ary mialy kely be fory angaha tsy mba hilatsaka hofidiana eh,hifidy azy aho raha mety mamelatra amiko sy minono bi2ty izy kah
Koa inona moa no nametrahan’i Mpanjanaka azy eo raha tsy HANDROBA sy
HAMOTIKA ary ny tena loza dia HANONTAFADY ny HASIN’I GASY, EFA VOAHOZONA e!!
Tsika tsy kivy ry Neny fa tsy maintsy mitraka hatrany, isika miaraka @ Mahery sy ny TOMPONY AVO INDRINDRA,
mampalahelo fa dia Gasy iray râ @’tena no mahavanin-doza toy izao MBA HANOMEZANA VAHANA NY MPANJANAKA.
DIA EFA TENA NIDIRAN-DOZA INONA IRETO OLONA????EFA TOTOM-BITANA MIHINTSY.TANY MASINA IO e!izay ihany….
ary i Rabaradaka indray angamba ity nitsangana t@ maty ity???
Mba matsintsiana fa zanak’i dada anie no ato e!!aza miteny ratsy fa bedy!!
Moramora ihany fa sao mandoto ny sehtra hafantsika maneho hevitra.
Lily moa ilay TSY NIDITRA « systeme » ?! hi hi hi
mardi 5 mars 2013, par Bill :
« Naïka Eliane, ancienne sénateur sous le régime Ravalomanana, aujourd’hui membre du Conseil supérieur de la transition (CST), et qui fait partie des cinq personnalités politiques à bénéficier de l’amnistie large et de plein droit, déclare qu’elle n’a pas déposé de dossier de demande d’amnistie, qu’elle ne déposera pas car elle n’en a pas besoin, étant clean en quelque sorte. »
Aza mba mora amidin’ny « sasany » oa .
Mandiso fanantenana sy fiheverana mihitsy ny olona toa anao.(azafady aloha e!)Noheverina fa mba hahitàna hevitra mitombona sy manana ny mahaizy azy, kay mpitolona mora ihany ???! Be ny kobaka avy amin’ireo mihevitra azy ho ministrable e !
Rehefa mahay mandainga sy mandahatra anie dia isan’ireo olona arivo mora ahodina ihany e !
Inona indray hono no resahin’ny « sasany » sy Lily ao @ fesse-boka ao e ???
Mahereza o ! 😉
Aza adino :Ny mpamosavy mandeha alina aza misy mpahita hono !
Nahoana hono izy no misitrika any @fesse boka any no manenjana fa tsy mba miseho masoandro ???
Sa kosa angamba hitany ihany fa maivana dia maivana tokoa ny mba resaka ataon’ny « sasany » eto ?
Rehefa nandini-tena tokoa aho Ranavalona dia , hitako fa diso làlana aho.
Toa tsy eto tokoa no toerana mety amiko fa raha manenjika an’i Eliane, ianareo kosa tsy misy « bedy », tsy misy miteny, raha manenjika andro aman’alina an’i….KOTOVELO -BENANGY-MANGIDY…..sy….. »Maitresse » Hanitra
Dia tsy mety amiko tokoa fa dia aleoko manaja tena toy ny ataon’i Vonifanja. Aleo mangina, fa ianareo efa mikarakara ny handresen’i Ramatoa Ravalomanana.
Ianareo dia efa ampy hanohana azy sy hitondra azy @ fandresena e !
Miseho eo iany aho raha misy fanenjehana mikasika ireo OLO-MANAN-KAJA sy MENDRI-BONINAHITRA ireo : Rtoa Hanitra RAZAFIMANANTSOA sy Atoa Mamy RAKOTOARIVELO izany, satria raha tsy ireo olona ireo , amiko manokana, DIA EFA TSY NISY INTSONY IZANY ANTSOINA HOE « TOLONA » IZANY !
Njara koa ve mi délire e?raha tsy ireo olona ireo efa tafaverina teto am tanana ny PRM! Io Mamy io no namitaka ny Prm tam fanaovan tsonia ny fdr ,mbola misy traitrise hafa koa fa mbola tsy holazaiko izao…
Tsy sanatria aho manilika (SANATRIA) tsy ahy ity Mydago ity fa ny zavatra
tena mampalhelo ahy dia ianao toa hafahafa fijery, tsy adala daholo ny olona miteny eto
ny momba an’i Mamy R, ary izy mihintsy no efa nitonon-tena NILELAKA an’i domelina izay isany ankahalainao
fatratra koa hatr@ voalohany, fa tsy haiko inona no manosika anao ankehitriny ny aminy ,ny mbola HANATSARA
AZY???TSY AZOKO???ombao izy fa aza hatsaraina ksa nefa efa hita izao fa MAIMBO ARY MAIMBO FOZA.
I Maitre Hanitra izaho manokana mbola tsy niteny na nanaratsy azy teto satria nisy zavatra nataony tany aloha tany
tena HIDERAKO AZY MANOKANA ary mbola io izy io eo ihany ,amiko tsy misy ny olana @ M. Hanitra, i Kotovelo
koa mbola manana fahefana lavitra noho izy .
Dia naninona indray koa ary i Ramatoa Naika , nefa ianao aza no tezitra tamiko izaho nilaza hoe » Kala Naika » tadidinao
ve????fa msy inona Njara a??maninona ianao no nivadika TAMPOKA TEO???misy tsy mazava???
28 avril 2013 à 6 h 22 min
Mba azonao hazavaina ve ilay tianao ho lazaina eto @ ity « Lily moa ilay TSY NIDITRA « systeme » » ?
Manarak’izany, raha azoko ny tianao ho lazaina dia tsy mankasitraka an’i naika Eliane ianao, sa tsy izay ?
Ny @ Naika Eliane dia mahita aho fa tena mitolona izy ary manaraka tsara ny filoha Ravalomanana, ka tsy azoko loatra ny tinao ambara @ ilay amnestia…
Miandry fanazazana aho izany e. I iry Lili volaza ery ambony ery ? dia maninona io ? inona ilay olana @ Naika Eliane….?
Nihiditra « système » ??? Valiny : Nataon’ny sasany ny sonia, ary rehefa vita izany na dia tsy fantatry ny Filoha aza ny antsipirian’izay tena nosoniavina (fantatra izao ny vokany na dia efa nokianina hatry ny ela aza io fanaovan-tsonia io *), DIA NANOME BAIKO ARY NANENDRY an-dRamatoa NAIKA Eliane sy olona hafa ny Filoha hiditra sy HANARA-MASO izay ataon’ny sasany ao ! Mbola mila azavaina impiry izany ????
Misy zavatra tsy ho lazainy, ary somary ho saror’aminy ny hanazàva an’izany eto !
Fa izao fotsiny ry ngama â, tsy mila amnistie izy raha mbola zavatra tahak’izao no entinareo eto (video). Misy resaka hoe olona dimy no ni-torturer azy ; rahatoa ka tsy fantatro hoe ban’ieu manodidina an’i Paris hono no misy anareo, dia angamba ho lasa mihintsy ny eritreritra fa hoe ianareo ilay 5ème homme, noho ny fankahalàna toa diso tafahoatra ! Ho lasa ihany koa ny eritreritra fa ianareo no nametraka an’ilay « flesy » sy ireo kanety tao amin’ilay efi-trano ilany !
Mba tadidio itony ary, ary jereo koa ireo horonan-tsary hafa, izay marihina eto fa MyDago no nak’azy :
– Jugée, sur le parking
– DIEU, pourquoi tu as laissé faire cà à la sénatrice ( fitsapàn’Andriamanitra koa ve izany ??????)
– Eliane, Charles, Lylison, Richard et les gendarmes ( et enfin….Njara ???). MDR !!
* Anisan’ny vokatr’ilay fanaovan-tsonia : Fiverenan’i Ratsiraka hilatsaka amin’ny fifidianana. 34 atramin’izao no fantatra fa hifanandrina amin-dRamatoa Lalao Ravalomanana izay an’irery TENA MPIARO NY ARA-DALÀNA !!!!! Mandeha ihany koa aza ny resaka fa mbola hametraka ny dosie-ny koa androany ilay domelina.
Tsy ny Filoha Ravalomanana mihintsy no nanome baiko tamin’ny septambra 2011 hoe tsy maintsy « ataonareo » sonia io tondrozotra io ! Araky ny voalazako tetsy ambony, izay voasoratra tao anatin’ilay izy aza TSY FANTANY AKORY !!!!!
Ianao zany km ohatran’ny oe manopa an’i Njara an…
raha Sakamalao sy avozo ireo, samy manana ny hanitra ho azy.
Ny haihay tsy hiavanana, nefa ry zareo telo samy mbola milahatra ao anaty mouvance!
Sao de mba misy ny critique positive, mifantoka kokoa any @ fanamboarana ny HO AVY. Sa efa vandana, hita fa karikary foana?
28 avril 2013 à 10 h 51 min
HoAiza, izany angaha no fahitanao azy ???? Mba mahaiza mandray resaka vazivazy re ê !
Ireo dia resaka entina hampieritreritra, na koa mitondra hevitra ho dinihina eto rahatoa ka ilaina marina izany !
Ary sao dia misy zavatra fantatrao kosa nataon’i Ramatoa Naika ry HoAiza, fa izaho marina no diso sy tsy mahafantatra ?
Mba fatapantatro ihany mantsy io olona io, mba tsy hilazana hoe fantatro be satria tsy mety ny mandainga ; fantatra daholo ihany koa ny nahazo azy na izay rehetra nataony « na dia nisy namitak’azy aza tao amin’ny GTT TALOHA » ary anisan’izany ilay Emile !! Ny tolona mbola ataony dia fantatry ny rehetra !!
Amiko aloha tsy dia azoko loatra ity fanenjehana an-dRamatoa Naika ity ê !
Bainga mivadika no andrasana amin’ireo mpitarika nanao izay azony « natao rehetra », araky ny filazan’ny sasany ! Firotsahan’i Ratsiraka aloha izao no hita farany ary ny Filoha Ravalomanana mbola tafajanona any Afrika Atsimo atramin’izao !
Fanohanana an-dRamatoa vadiny izao no himasohana ! Ho atsangana ihany koa ny antoko GTT-Madagasikara ary tsy maintsy ho tafatsangana, hanohana mafy ny kandidà-n’ny mpanohana ny ara-dalàna satria ny TIM toa tsy misy rototra amin’izay hiafaràny !
Hatsangana ary manohana ny GTT-Madagasikara ny tenako, na dia misy aza ny malahelo mba tsy hilazàna hoe mialona !!!
Toa ohatran’ny vohizinao any amin’ny lalan-kafa koa izato tenako?
Tsia dia tsia izany Rahavako izany !! Ianao no miresaka amiko dia apetraka aminao ilay fanontaniana sao dia mba misy zavatra maizimaizina tokoa ataon-dRamatoa Naika any ambadibamdika any ! Mipetraka amin’ny rehetra koa ny fanontaniana !
Ny fahitako azy aloha, dia tsy mahafantatra zavatra maizina izany ny rehetra ê ! Ny fiainany perso koa aloha dia tsy hidirako mihintsy, na dia efa nisy nivohy teto koa aza izany, nentina hanenjehan’azy !
Aoka ho Borkena any, io resaka io ê !
Itony izao no tokony dinihan-tsika, ary mipetraka ny fanontaniana hoe : Maninona ny mpanao Gazety any ivelany (misy malagasy koa), MBOLA MIVOHY FOANA ATRAMIN’IZAO FA INGAHY RAVALOMANANA SY NY MIARAMILANY NO TOMPON’ANDRAIKITRA AN’IZAY NITRANGA TENY AMBOHITSIROHITRA TAMIN’NY 7 FEBROARY 2009 ???
Tsy mahagaga an-dry zareo akory izany filatsahan’i deba izany, ary ho raisin-dry zareo ho toan’ny Mesia akory angamba atsy ho atsy !!!
Rahatoa ka matahotra ny vahoaka, maninona ireo mpitarika-n’ny Movansa Ravalomanana, efa erin-taona sy tapany taorian’ny fanaovan-tsonia, no tsy nahavita nanenjika sy nampitsahatra ny fanosoram-potaka an’ny Filoha Ravalomanana ???
Avela hanao ‘diffamation » ve ny rehetra, sa ry zareo koa dia mihino fa ny Filoha Ravalomanana no nanome baiko hoe : VONOY DAHOLO IZAY REHETRA MIAKATRRA ENY AMBOHITSIROHITRA ENY ???
Santionany fotsiny itony ! Agence Reuter fa tsy AFP !!
Miala tsiny fa tsy mety ilay rohy fa satria « candidat » lasa « cabdidat » !
Tsy maninona, fa raha mitady kely fotsiny ianareo, dia mitovitovy daholo ny zavatra voizin-dry zareo atramin’izao !
Azo ekena foana ve izany ??
Inona marina no tadiavin-dramalagasy ? Raha mitohy izao dia tena izay vao tena ho any anaty lavaka, mandritry ny zato taona i Madagasikara !!
Hisaorana daholo ireo izay nitazam-potsiny rahatoa ka dia tena izany no tadiavina !!!
Ka efa mba nisy ve namoaka ireny VIDEO sy ampamoaka an’i Charles ireny??
misy ve TV afaka ny hamoaka ireny MATETIKA indrindra ao France, no aiza no tsy hanjaka ny lainga,
sady efa fantatra koa fa ny FRANTSAY OLONA TRANON-Dainga rahateo , indrindra rehefa hiaro ny
rambony izay izy annn…tsy menatra mihintsy??????
…koa tsy hitako izay mahagaga raha mbola misy mivohy ilay lainga marivo tototra fa i Dada no nanao
ireny habibiana ireny, sady izy io tsy avela hiditra hilatsaka io, dia vao maika mahazo vahana ny sasany
efa hay koa izany fa efa izay no tanjona e!!mbola tetika hanakanana MAFY an’i dada daholo izany na
inona na inona FIHOVANA eo.
Raha vao misokatra ny MBS dia tokony ireny ampamoakan’i Charles ireny no atao drindran-gilo.
30 no henoko hilatsaka, kay vao maika nitombo???aiza kosa koa Domelina aza prėzidà koa tsy mba
ho avy koa ny sasany???very aho ry tanindrazako!!!honena anao ny foko ry taniko, dia efa miomana
indray izany ny Be mangovitra sy ny valala ary lagaly sns fa miverina DEBA.
Raha mba nanoratra taratasy fangatahana « tamin’ny fomba ôfisialy » FOTSINY ireo CT sy CST rehetra ao anatin’ny Movansa Ravalomanana ( izany hoe nanao sonia DAHOLO ), nangataka ny hisian’ny ANKETY izay hiadidian’ny ONU sy ny Vondrona eraopeana momban’io raharaha 7 febroary io, angamba tsy ho toa izao ny tantara ! Tsy haiko aloha ê ! matoa tsy nisy dia satria TSY NANGATAKA ! Fa nahoana aza no tsy nangataka ?
Sao dia mahafantatra ny valiny ianao ?
Vaovao tao amin’ny MATV no nandroso an’izany isa 35 izany ê ! Asa na firy ireo nametraka ny dosie-ny androany ??
Aleo hilatsaka daholo ny avy amin’ny TGVista fa mampizara ny an-dry zareo izany.Ny anay dia tokana ihany:Lalao Ravalomanana
Efa hatao montra,ity ny fampielazan-kevitra. Samia manamafy an’ i Lalao RAVALOMANANA @ izay tandrifiny avy ny,tsirairay. Mila manaparitaka,vaovao,haingana isika, ary mifanakalo vaovao,ihany koa. Jereo ny tanjona fa izay handresen’i Lalao RAVALOMANANA. Izaho manokana. Da voatery hikipy @ adalan’ireo mpanao polifika..mbola lava ny lalana fa ny fanomanana ny fifidianana aloha ozao no lahatra-pahamehana.
Marihiko éto fotsiny hoe, aorian’ireo anaran’ambositra ireo dia misy olona tena mahagaga tokoa. Misy olona akaiky an’io Mamy Rakotoarivelo ohatra, fa isika no,tsy mahafantatra dia mihevitra, jamban’ny fankahalana. Ny tiako,ho.lazaina dia hoe,,tena misy l’on a mahalala izaynlainy tokoa éto fa tsy misy izany manakiana an-jambany izany.
Toy ny tongotra vakivaky io ry LAZALAZAO â, sady marary no maha menatra ! Rehefa mba manoro fanafody sy izay tokony ho atao mba tsy hisian’izany tongotra vakivaky izany intsony anefa, dia ny sasany indray, no toa tonga dia avo-vava sy be kaomantera !!
Momban’ny lazainao hoe olona manodidina an’Ingahy Rakotoarivelo ! Tsy iray na roa !
Nisy olona iray izay tena efa nandao sy nisintaka ary tsy dia miseho firy intsony amin’izao fotoana, kanefa mbola mahavita mi-telekaomandy amin’ny « b agety majikany » atramin’izao !
Rainivoanjo dit :
Ramatoa Ravalomanana dia nilaza fa hoe vonona. Eny eh, tena nanantena ny fahatogavany sy ny fahavononany tokoa ny reniny Bebe Razay. herinandro vitsivitsy izay. Tsy hita tableau intsony ny fahasalaman’ny Bebe malala izao.
Izaho dia isan’ny ireo niady mba hiverenan’i Mme Lalao hikarakara ny reniny. Masina ny reny.
Kanefa de akory ny fahagagana. Raha nahatsapa fa voafitaka ny tenako. Lainga kay ilay izy. Natao fitaovana ny aretin’i Bebe Razay.
Aza manonona ny anaran’i Tompo intsony. Fa manavetaveta ny finoana kristianina.
Ahoana hono ry Rainivoanjo itony mody lazain’ny sasany heo vazivazy itony ???
Vazivazy fanaon’izy mbamin’i Lily angamba ??? Mbola vitsy no mahalala fa r’izalhy sy Mydago anie ka olona iray ihany e ! Tena marina io an ….! SOLO RAZAFY sy ny Webmestre ihany no poretina atao mahamay MdRRRR !
» Ho lasa ihany koa ny eritreritra fa ianareo no nametraka an’ilay « flesy » sy ireo kanety tao amin’ilay efi-trano ilany !
– Eliane, Charles, Lylison, Richard et les gendarmes ( et enfin….Njara ???). MDR !! »
Précédent Article précédent : Madama Lalao Ravalomanana Rakotonirainy a effectué une visite à l’usine Tiko Sambaina
Suivant Article suivant : Visite de Mme Lalao RAVALOMANANA à l’usine TIKO de Sambaina – Manjakandriana